बीसीसी युकेद्वारा लोपेन किन्लेको बिदाई
जगनकुमारी गुरुङ -
अल्डरसट । बौद्ध धर्म गुरु लोपेन किन्लेको एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको छ ।
गत आइतबार बुद्धिष्ट कम्युनिटी सेन्टर (बीसीसी) गुम्बामा बिहान आयोजित कार्यक्रममा लोपेन किन्ले गुरुको बिदाई गरिएको हो । बिदाई कार्यक्रममा बीसीसी युकेका अध्यक्ष कार्यक्रममा बीसीसी युकेका अध्यक्ष ले.रि. नारायणप्रसाद गुरुङ बीइएमले लोपेन गुरु भुटानी भएर पनि नेपाली बोल्ने र पूजापाठमा राम्रो ज्ञान भएको बताउदै उनले बीसीसी युकेको आमाहरुलाई साम्बोटा लिपि सिकाई दिएकोमा धन्यवाद दिए । त्यस्तै बिसीसी युकेका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर गुरुङ, आमा समूहकी अध्यक्ष पुष्पा गुरुङ, बीसीसी युकेको सल्लाहकार जंगबहादुर गुरुङ र जगन कुमारी गुरुङले उनले दिएको योगदानको चर्चा गर्दै धन्यवाद सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिए ।
करिब एक सय जना भक्तजनको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा गुरु लोपेन किन्लेले आफू भुटानी भएर पनि नेपाली भाषा सिकेकोले अहिले काम लागेको बताए । उनले आफ्नो गुरुले आफूलाई बिसीसी गुम्बामा पठाएको बताउदै इच्छुक भक्तजनहरुलाई भुटान भ्रमणका लागि निम्ता दिए ।
सोही दिन दिउँसो हिज होलिने पलयुल गेङ खाङ खेउल पनि गुम्बामा आएका थिए । उपाध्यक्ष हर्कबहादुर गुरुङले हिज होलीनेस गुरु, रिम्पोछे छेवाङ गुरु, अन्य गुरुहरुका साथै उपस्थित भक्तजहरुलाई दुई शब्दले स्वागत गरे । हिज होलिनेस गुरुले बुद्ध धर्मको प्रवचन, अभिताव बुद्ध र आयुको वाङ दिएका थिए । उनको प्रवचनलाई रिम्पोछे गुरु छेवाङले नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ले.रि. गुरुङले हिज होलिनेस गुरुलाई आफ्नो अमूल्य समय गुम्बालाई दिएकोमा धन्यवाद दिए ।
बीसीसी युकेका अध्यक्ष ले.रि. नारायणप्रसाद गुरुङ बीइएमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई महासचिव गोविन्द गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।